Caafimaadka Galmada iyo Healthy Relationships | USAHello | USAHello
caafimaadka galmada iyo xiriirka caafimaad
xidhiidhka caafimaadka galmada iyo caafimaad leh waa u muhiim caafimaadka guud. macluumaadka caafimaadka galmada mowduucyada sida iska ilaalinta cudurada galmada lagu kala qaado, cilaaqaad wanaagsan, iyo ka hortagga uurka.
mawduucyada caafimaadka galmada noqon kartaa mid adag in ay ka hadlaan. Waxaa laga yaabaa inaad ka bulsho aaminsan hadlaya qariib ah ku saabsan galmada ama xidhiidhka caafimaadka yimaadaan aan la aqbali karin. Si kastaba ha ahaatee, ee USA, waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga ugu weyn (PCP) ku saabsan wax dhibaato caafimaadka galmada aad leedahay. Waxay kaa caawin karaan, ama waxay ku talin karaa nooc kale oo xirfadle caafimaad oo kaa caawin kara.
Halkan waxaa ku qoran dhowr siyaabood oo aad iskaaga u baratid caafimaadka galmada:
Planned Parenthood waa urur waxaa ka go'an in horumarinta caafimaadka galmada iyo taranka dadka dalka oo dhan. Waxaad booqan kartaa mid ka mid ah xaruumo badan ee caafimaadka galmada oo Qorshaysan Parenthoods yihiin guud ahaan dalka. Waxaa, aad la xirfadle caafimaad oo ku saabsan wax su'aalo ah ee la xiriira caafimaadka galmada la hadli kartaa. Waxaad kaloo booqan kartaa website-aad iskaaga u baratid badan mawduucyada caafimaadka galmada.
Tag Weydii Alice waa website halkaas oo ay dadku soo diri kartaa su'aalaha la xiriira arrimaha caafimaadka, oo ay ku jiraan caafimaadka galmada iyo xiriirka. Jawaabaha Old waxaa lagu soo ururiyay oo lagu daabacay, sidaa darteed waxaad ka akhrisan kartaa iyada oo loo marayo jawaabaha su'aalaha la soo dhaafay. Waxaad kaloo weydiin kartaa adiga kuu gaar ah.
Xarunta Agabka Waxbarashada Isdhalida The ayaa tiro ka mid ah khayraadka ku saabsan mawduucyo caafimaadka galmada gaar ah oo qoraal ah dhagaystayaasha qaxooti.
Lahaanshaha xiriir farxad iyo caafimaad qof kale, sida nin ama naag, wax badan oo farxad keeni karaa noloshaada. Xiriirka A noqon kartaa il xoog iyo taageero niyadeed xilliyada adag iyo waxa ay ku dari kartaa in aad farxad jeer ku faraxsan.
Xarunta Kacsiga ee Resource Waxbarashada, in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan ka akhriyi kartaa xidhiidhada u dhexeeya hawlgalayaasha. Planned Parenthood sidoo kale waxay leedahay macluumaad ku saabsan website ku saabsan a xiriirka caafimaad.
Marka qof ay ninkaaga ama xaaskaaga dhaawacdaa, gabar ama wiil saaxiib, waalidka ama ilmaha, ama qof kasta oo kale in ay qoyska, in uu yahay "rabshadaha qoyska."
Calaamadaha rabshadaha qoyska
Dagaalka qoyska wuxuu noqon karaa dhibaato jireed, dhibaato xagga dareenka ah, ama labadaba. The Hotline Rabshada Qoyska ee Qaranka website ayaa sheegay in laga yaabo in aad la il daran xadgudubka haddii aad isqabtaan waa:
aad ugu sheegayso in aad marnaba wax xaq samayn karaa
Muujinaya masayrka ah saaxiibadaa iyo waqti iska qaatay
aad hayo ama aad niyad aragto saaxiibadaa ama xubno ka tirsan qoyska
aflagaado, dulleeya ama aad yasid la shubtaa-taxne
Xakamaynta dinaar kasta oo qaatay in reerka
Qaadashada lacagtaada ama diiday inay ku siiyaan lacag kharashka
Raadinta aad at ama ku simaha siyaabo in aad cabsiiyo
Xakamaynta cidda aad aragto, meesha aad tagi, ama waxa aad sameyn
aad hortagidda ka qaadashada go'aamada adiga kuu gaar ah
aad ugu sheegayso in aad tahay waalid xun ama halis in wax la yeelo ama carruurtaada qaadi
aad hortagidda ka shaqeeya ama wax ka barata dugsiyada
Burburinayo hantidaada ama hanjabaad ah in ay dhaawici ama ma dilaa xayawaankaaga guriga
aad handadaad qoryo, mindiyo ama hub kale
aad cadaadiyo in ay galmo marka aanad rabin in, ama la sameeyo wax galmada aadan raaxo leh
aad cadaadiyo in ay isticmaalaan maandoriyaha ama qamriga
Maxaan sameyn karaa oo ku saabsan rabshadaha qoyska?
Haddii ay kuu muuqdaan saaxiibada kuwaas oo aan xiriir caafimaad oo aad u malaynayso lammaanahooda waa iyaga waxyeelo, waxaa jira caawimaad la heli karo. Haddii adiga ama qof kale oo loo geeysto dhibaato, ama khatar deg deg ah oo lagu Dhibay, waxaad wici kartaa booliiska.
Tag hoyga a
A hoy rabshadaha qoyska waa meel aad ku meel gaar u socon kartaa haddii aad isku dayaya in ay ka baxaan lamaanahaaga-gudub. Haddii aad leedahay si aad u hesho ka mid ah gurigaaga si deg deg ah si ay u sii joogi ammaan ah, hoy ah rabshadaha qoyska waxaa laga yaabaa in doorasho adiga kuu wanaagsan. Raadi hoy ah kuwa la kulma dhibaataynta qoyska.
Wac khadka joogtada ah
1-800-799-7233 waa lambar telefoon oo ka mid ah Hotline Rabshada Qoyska ee Qaranka. lambarka telefoonka waxaa ku shaqeeya 24 saacadood maalintii. Waxaad wici kartaa khadka gargaar.
cudurada galmada lagu kala qaado (STDs)
STD-yada waxaa mararka qaarkood loo yaqaan cudurada galmada lagu kala qaado (STIs). Waxay yihiin cudurada galmada maray. Tababbar galmo amaan ah, oo ay ku jiraan isticmaalaya kondhom, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wax ku ool ah oo aad isaga yarayn karto halista ka qaadida STD aad. Haddii aad u malaynayso inaad qabto STD a, hubi in aad la hadal dhakhtarkaaga si aad baari karaa.
Saddex ka mid ah STDs ugu badan ee USA ay yihiin:
Planned Parenthood ayaa warbixin ku saabsan iyo STDs kale. at Multicultural HIV iyo Hepatitis Service, waxaad ka heli kartaa agabyada STIs kala duwan, oo dhan turjumay afaf kala duwan.
ragga iyo dumarka galmo ahaan firfircoon kuwaas oo doonaya in ay gacanta ku marka ay carruurtu isticmaali karaan ka hortagga uurka (sidoo kale loo yaqaan ka hortagga uurka) si looga fogaado in uurka. Maxaa doorasho xakamaynta dhalmada waa xaq, waayo, waxaad ku xidhnaan karaa dhowr arrimood badan oo kala duwan, sida da'daada, taariikhdaada caafimaad, iyo haddii aad rabto in aad leedahay carruur mustaqbalka.
xakamaynta dhalmada loogu tala galay dumarka ku yimaado qaabab badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan kiniin, duritaanka, ama qalab yar oo lagu magacaabo IUD in la galin karaa jidhka dumarka. ka hortagga uurka ee ragga ku yimaado qaabab badan sida cinjirka, waayana, ama vasectomy. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha ka hortagga uurka.
Haddii aad xiisaynayso in xakamaynta dhalmada, waa in aad la hadal dhakhtarkaaga wixii macluumaad dheeraad ah. Haddii dhakhtarkaagu aanu awoodin in ay bixiyaan gargaar, raadiso rugta caafimaadka meesha aad caawimaad ka dhakhaatiir aqoon iyo kalkaaliyayaal ah oo ku saabsan ikhtiyaarka xakamaynta dhalmada kugu habboon heli kartaa. Waad awoodaa u heshid xarunta beesha caafimaadka on FindHello. Ama aad awoodid raadiso rugta ka hortagga uurka ah iyo adeegyada kale ee ka hortagga uurka. Ikhtiyaar kale waa inuu ka tago rugta Planned Parenthood kuu dhow.
Waa maxay dhakhtar?